ဘီယာသောက်ခြင်းက သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘာကြောင့်ကောင်းမွန်စေနိုင်တာလဲ? – Trend.com.mm
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသောက်အများဆုံးနဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး အရည်တစ်မျိုး ၊ အထူးသဖြင့် ဥရောပနဲ့ မြောက်အမေရိက မြောက်ပိုင်းတွေမှာ ပိုမိုမှီဝဲသောက်သုံးကြပါတယ်။သူငယ်ချင်းတွေ ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ စကားလေးဘာလေးစမြည်ပြောရင်း ဘီယာလေး တစ်ခွက် ၊ နှစ်ခွက်လောက် တစ်မြုံမြုံသောက်ပြီးပြောရတာလည်း အလေ့ထတစ်ခုလိုဖြစ်လာပါပြီ။ဒါမှလည်း စကားပြောလို့ကောင်းမှာကိုး။ ဘီယာကို ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာကြောင့် မှီဝဲသင့်လဲဆိုတာကို သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း လက်တို့လိုက်ပါဦးနော်….
ဘီယာမှာ antioxidants ၊ ပရိုတိန်းနဲ့ ဗီတာမင် ဘီပါဝင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် အဓိကလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ flavonoids နဲ့ Minerals ဓာတ်တွေများစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဘီယာက ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အကျိုးထောက်ပံ့မှုတွေကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအကျိုးထောက်ပံ့မှုတွေလဲဆိုတော့…
ဘီယာတစ်ခွက်က ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တွယ်ခြင်းကို ၄ဝရာခိုင်နှုန်းလျော့ချပေးနိုင်တာကြောင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါဖြစ်မှာကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောတွေကိုလျော့ကျစေပြီး အမျှင်ဓာတ်တွေကြွယ်ဝစေပါတယ်။
B12, B6, B2 နဲ့ B1 တို့ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် ဘီယာသောက်သုံးသူဟာ ဝိုင်သောက်သုံးသူထက် Vitamin6levels မြင့်တက်မှုကို ပိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘီယာသောက်သုံးခြင်းဖြင့် စိတ်ဂယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်ခြင်းနဲ့ အယ်ဇိုင်းမားရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်း တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ ကျန်းမာရေးပညာရှင်များကတော့ တစ်နေ့ကိုနှစ်ခွက်လောက်သောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။
အရေပြားကိုကြည်လင်တောက်ပလာစေပြီး ငယ်ရွယ်နုပျို အရွယ်တင်စေပါတယ်။ ညဘက်အိပ်မပျော်သူများလည်း ဘီယာက နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်နိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ညသန်းခေါင်ယံအချိန် ရင်ပူရင်ဆာဖြစ်ခြင်းကို ၄၀ – ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းထိသက်သာစေပါတယ်။အရိုးဆစ်တွေလည်း သန်မာစေပါတယ်။ ကဲ.. ဘီယာချစ်သူများတော့ ဒါဖတ်ပြီးရင် ပြုံးပြုံးကြီးပီတိဖြာနေတော့မယ်ဟုတ်… ဘီယာမကြိုက်သူများလည်း အတင်းသောက်ဖို့ မတိုက်တွန်းပါဘူး။ အခြားကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတာတွေလည်း ရှိတာမှန်ပေမယ့် ဒါလေးက ဆေးလည်းဖြစ် ၊ ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းစေဆိုတော့ ပိုအကြိုက်တွေ့မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။